Moobiil Ha Ugu Yeerin Diiwaanada
Moobiil Ha Ugu Yeerin Diiwaangelinta Dhawaan
Khamiis, Janaayo 20, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxay umuuqataa in lambarada mobilada lagu dari karo diiwaanka Indiana ee ha wicin dhowaan. Ma jiro weli wax hadal ah oo sheegaya inay tani saameyn ku yeelanayso farriinta qoraalka iyo in kale, laakiin shaki kuma jiro inay tani ku dhow dahay.
The Boqortooyada Ingiriiska iyo Canada horeyba ugu dar nambarada mobilada ee diiwaangelintooda xushmadda leh Ha u Wicin. Dalka Mareykanka, Utah iyo Michigan labaduba way leeyihiin Ha ugu yeedhin diiwaangelinta taas waxaa ka mid ah wicitaanka moobaylka iyo SMS horeyba. Fikradayda, waxaan aaminsanahay inay tani tahay war weyn. Weligay waxaan u doodi jiray suuqgeynta ku saleysan rukhsadda. Anagoo si aqlabiyad leh u qaadinay aaladaha mobilada dadka da'da yar, waxay ahayd inaan meel marino diiwaan gelinnada DNC sanado kahor. Dabcan, markaa tobanaan milyan oo doollar oo lagu soo oogay adeegyada mobilada ee sharci darrada ah lama soo aruurin karin.
Tani waxay muhiim u tahay suuqleyda iyo adeeg bixiyaasha labadaba. Haddii aad isticmaaleyso farriin cod ama adeegyo fariin qoraal ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in adeeggaagu uu nadiifinayo lambarrada diiwaanka ee dirista farriimaha. Walter Meyer, Madaxweynaha iyo COO of Vontoo - oo ah hoggaamiye adeeg cod iyo fariin qoraal ah ayaa sheegay in shirkaddoodu ay kala shaandhayso wicitaannada dibedda ee ka dhanka ah liisaska federaalka iyo gobolka ee DNC
Waxyaabaha maskaxda lagu hayo waa in haddii shirkad ay leedahay ogolaansho qoraal ah inay qof la xiriirto, way sameyn karaan xitaa haddii lambarka qofkaasi ku qoran yahay DNC. Walter Meyer, Vontoo.
Walter wuxuu intaas ku daray inuu isagu u wada yahay liistada ha la soo xiriirin oo loogu talagalay waraaqaha qashinka (boostada) iyo emaylka, sidoo kale… waa guul u soo hoyatay suuqleyda anshaxa iyo guud ahaan dadweynaha. Walter wuxuu ka hadlay caqabadaha suuqgeynta codka wuxuuna yiri inkasta oo Vontoo ay si taariikhi ah diirada u saartay suuqgeynta, kobocooda ugu xoogan wuxuu kujiraa xusuusin, ogeysiisyo, iyo baaritaano.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Ha u wicin diiwaangeliyayaashu uma dhaqmaan si la mid ah emaylka. Iimayl ahaan, waxaad kuusoo diri kartaa emayl bilow ah illaa intaad haysato qaab aad kagabixi karto. Waqtigan xaadirka ah, tani waa sida farriinta qoraalka caadiga ah ay u shaqeyso… waa inaad doorataa si aad u hesho farriinta qoraalka oo aad uga bixi karto wakhti kasta. Marka diiwaangelinta (iyo ganaaxyada ku xiga) ay jiraan, weligaa xitaa ma diri kartid farriinta ugu horreysa - haddii kale waxaad halis ugu jirtaa qaar ka mid ah ganaaxyada bahalnimada!
Waa kuwan liiska meesha aad ka heli karto liistada ha u wicin gobolka: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin iyo Wyoming.
The federal Ha Wicin Diiwaangelinta Mareykanka hadda ma ilaalineyso macaamiisha mobilada… laakiin waxaan hubaa in ku darista mobilada iyo farriimaha qoraalka ay dhowdahay.
Isku dar WordPress iyo Blog Talk Radio